အဟောင်းများနှင့် အသစ်များ: May 2010
ကျန်ရှိနေတဲ့သက်တမ်းကို ဘယ်လိုနေမလဲ (ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက)
(စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေ အလွန်အမင်း ကျဆင်းနေချိန်၊ တကယ်ကို ဘာလုပ်လုပ် ကံမကောင်းမှုတွေနဲ့ပဲ ကြုံနေရတဲ့ ကာလမှာ ဆရာတော်ရေးတဲ့ ဒီစာလေးကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ဖတ်အပြီးမှာတော့ ရှေ့ဆက်ဖို့ အားအင်လို့ပဲ ပြောရမလား အလင်းရောင်လို့ပဲ ပြောရမလား မသိ၊ ရုတ်တရက် စိတ်ထဲမှာ ချမ်းသာ အေးမြသွားလို့ ကျမလို အားငယ် ဝမ်းနည်းနေသူ မိတ်ဆွေတွေအတွက် ဒီစာလေးကို တင်ပေးလိုက်တာပါ)
တစ်ခါတုန်းက ဂျပန်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဟာ နန်းဆောင်ထဲကို ၀င်လာခဲ့ပါတယ်။ သူဝင်လာချိန်မှာ အစောင့်တွေက မတားဆီးလိုက်နိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဘုရင်ကြီးဆီကို တန်းရောက်သွားပါတယ်။ ဘုရင်ကြီးကလည်း ဂျပန်ဘုန်းကြီးကို တွေ့ လိုက်ရတော့ ချက်ချင်းပဲ မေးလိုက်ပါတယ်။
“တပည့်တော်အရင် တပည့်တော် အဖေ နေသွားပါတယ်။ အခု တပည့်တော် အဖေ မရှိတော့ပါဘူး။”
“တပည့်တော် အဘိုး နေသွားပါတယ်။ အခုတော့ မရှိတော့ပါဘူး ဘုရား”
“တပည့်တော် အဘေး နေသွားပါတယ် ဘုရား”
နန်းတော်တဲ့၊ မင်းအဖေလည်း နေပြီး ထွက်သွားရပြီ၊ မင်းအဘိုးလည်း နေပြီး ထွက်သွားရပြီ၊ မင်းအဘေးလည်း နေပြီး ထွက်သွားရပြီ၊ မင်းလည်း နေပြီး ထွက်သွားရအုံးမယ်၊ ဒါတည်းခိုခန်း မဟုတ်လို့ဘာလဲကွာ”
ဂျပန်ဘုန်းကြီးရဲ့ စကားကို ကြားလိုက်ရတော့ ဘုရင်ကြီးလည်း တစ်ခါမှ မစဉ်းစားဖူးတဲ့ “သြော်... ငါဟာ တည်းခိုခန်းမှာ နေနေပါလား” ဆိုတဲ့ အသိဉာဏ်သစ် တစ်ခု လင်းကနဲ ၀င်သွားပါတော့သတဲ့။
ဘုရင်ကြီးက ဂျပန်ဘုန်းကြီးကို အခန်းပေး မပေးတော့ စာထဲမှာ ဆက်ပြမထားပါဘူး။ ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲ။ တကယ်တော့ ဂျပန်ဘုန်းကြီးပြောသလို အားလုံး အားလုံးဟာ တည်းခိုခန်းမှာ ခေတ္တခဏ ၀င်တည်းနေကြရတာပါ။ အချိန်တန်ရင် သတ်မှတ်ရက်စေ့ရင် အိမ်ပြန်ကြရမှာပါ။ ဒီတော့ တည်းခိုခန်းမှာ ဘယ်လောက်အထိ နေခွင့်ရအုံးမလဲ...?
လူ့ ဘ၀သက်တမ်းကို ယေဘုယျ ၇၅နှစ်ပဲ ထားလိုက်ပါတော့။ အသက် ၄၀ ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ တည်းခိုခန်းမှာ ၃၅ နှစ်ပဲ နေခွင့်ရတော့မှာပါ။ အသက် ၅၀ ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ တည်းခိုခန်းမှာ ၂၅နှစ်ပဲ နေခွင့်ရတော့မှာပါ။ အသက် ၆၀
ရှိတဲ့သူ တစ်ယောက်ဟာ တည်းခိုခန်းမှာ ၁၅နှစ်ပဲ နေခွင့်ရတော့မှာပါ။
လက်ကျန်အချိန်က နည်းနေပါပြီ။ ကျန်နေတဲ့အချိန်က ကိုယ့်အတွက် သိပ်တန်ဖိုးရှိနေပါတယ်။
ဒီအချိန်ဟာ သူတစ်ပါး ကောင်းတာ မကောင်းတာကို ဝေဖန်နေရမယ့် အချိန်၊ အရွယ် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်ကောင်းအောင်ပဲ နေရမယ့် အချိန်၊ အရွယ်ဖြစ်နေပါပြီ။
ဆိုလိုတာက သူတစ်ပါး ကောင်းတာ မကောင်းတာထက် ကိုယ်ကောင်းအောင် နေဖို့ က အဓိကပါ။
ဒီတော့ ကျန်ရှိနေတဲ့ သက်တမ်းကို ဘယ်လိုနေမလဲ....? ဒီမေးခွန်းကို နေ့ တိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးရမှာပါ။
ဒါဆို လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကို ဘာနဲ့ ဆုံးဖြတ်မလဲ။ ရာထူးဌာနန္တရ၊ ငွေကြေးဥစ္စာ၊ ပညာ၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှု၊ အခြံအရံတွေနဲ့ တိုင်းတာမလား။
ဒါတွေနဲ့ တိုင်းတာလို့ မရပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဆိုတဲ့ သိက္ခာသုံးပါးနဲ့ ပဲ တိုင်းတာရမှာပါ။ လူတစ်ယောက်ဟာ သိက္ခာသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံနေရင် တန်ဖိုးရှိနေတာပါပဲ။
ရာထူးဌာနန္တရ၊ ငွေကြေးဥစ္စာ၊ ပညာ၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှု၊ အခြံအရံတွေတော့ ရှိပါရဲ့ ။ ဒါပေမယ့် သိက္ခာသုံးပါး
မရှိဘူးဆိုရင် တန်ဖိုးရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ရာထူးဌာနန္တရ စသည်တွေလည်း ရှိမယ်၊ သိက္ခာသုံးပါးလည်း ရှိမယ်ဆိုရင်တော့
ဒါကို ထောက်ပြီး ကိုယ့်မှာ ရာထူးဌာနန္တရ၊ ငွေကြေးဥစ္စာ၊ ပညာ၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှု၊ အခြံအရံတွေ မရှိပေမယ့် ဘာမှ
အားငယ်စရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ သိက္ခာသုံးပါး တည်နေရင် ကိုယ်ဟာ တန်ဖိုးရှိနေတာပါ။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိက္ခာသုံးပါးတည်အောင် လုပ်လိုက်ရုံပါဘဲ။
မနက်အိပ်ရာထ ကိုယ်လက်သန့် စင်ပြီးတာနဲ့ဘုရားခန်းထဲသွားလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ငါးပါးသီလ ယူလိုက်ပါ။ ဒါဆို သီလသိက္ခာ တည်သွားပါပြီ။ နောက် ဂုဏ်တော်ကို ငါးမီနစ်၊ မေတ္တာကို ငါးမိနစ် ပွားလိုက်ပါ။ ဒါဆို သမာဓိ သိက္ခာ တည်သွားပါပြီ။ နောက်ဆက်ပြီး ၀ိပဿနာကို ငါးမိနစ် ပွားလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ပညာသိက္ခာ တည်သွားပါပြီ။
သိက္ခာသုံးပါး ကိုယ့်ရင်ထဲကို ရောက်သွားတာနဲ့ကိုယ်ဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့သူ ဖြစ်သွားပါပြီ။ ခက်လား။ မခက်ပါဘူး။
ဆယ့်ငါးမိနစ် လောက်ပဲ အချိန်ပေးရပါတယ်။
ပြီးတော့ “ငါ့ရင်ထဲမှာ သိက္ခာသုံးပါးတည်နေရင် ငါဟာတန်ဖိုးရှိနေတာပဲ” လို့အသံထွက်ပြီး သုံးကြိမ်လောက် ရွတ်လိုက်ပါ။
နေ့ ခင်းကျရင် တစ်ကြိမ် ရွတ်လိုက်ပါ။ ညပိုင်းရောက်ရင် တစ်ကြိမ်ရွတ်လိုက်ပါ။ အသံနဲ့ ပါ ပူးတွဲပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို
ကိုယ့်ရင်ထဲ သိက္ခာသုံးပါး ရောက်လာတာနဲ့စိတ်ပါဝါ စွမ်းအားတွေလည်း အလိုလို ရောက်လာတာပါ။
တရားသံနဲ့ ပြောရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြည်ညိုလာတာပါ။
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြည်ညိုသွားပြီဆိုရင် နေရထိုင်ရတာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်
ဖြစ်သွား တော့တာပါ။ သူတစ်ပါး ကြည်ညိုတာ မကြည်ညိုတာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြည်ညိုဖို့ က အဓိကပါ။
အသံထွက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးတာကို လျှော့မတွက်ပါနဲ့ ။ အသံထဲမှာ စွမ်းအားတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့ကို သုံးခါလောက် အသံထွက်ပြီး ရွတ်ဆိုပါ။ အသံကလည်း ကိုယ့်ရဲ စိတ်ဓါတ် တက်ကြွမှုကို ကူညီပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခါတလေ အဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လောကဓံဆိုးတွေ တွေ့ကြုံတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်
အားငယ်စိတ် ၀င်လာရင် ကိုယ့်ရင်ထဲကို သိက္ခာသုံးပါး တည်အောင် လုပ်လိုက်ပါ။ တည်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ဟာ တန်ဘိုးရှိတဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါဆို ဘာမှ အားငယ်စရာ မလိုတော့ပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို မချစ်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လဲ၊ ကိုယ့်မှာ သိက္ခာသုံးပါး ရှိတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို
မုန်းနေတယ်၊ ဘာဖြစ်လဲ။ သူ့ ဟာသူ ကြိုက်သလောက်မုန်း၊ ကိုယ့်မှာ သိက္ခာသုံးပါးရှိတယ်။ ကိုယ့်မှာ အခြံအရံ အသိုင်းအ၀ိုင်း မရှိဘူး၊ ဘာဖြစ်လဲ။ ကိုယ့်မှာ သိက္ခာသုံးပါးရှိတယ်။ ကိုယ်က မအောင်မြင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လဲ။ ကိုယ့်မှာ
သိက္ခာသုံးပါး ရှိတယ်။ ကိုယ့်မှာ ကားမရှိဘူး။ ဘာဖြစ်လဲ။ ကိုယ့်မှာ သိက္ခာသုံးပါး ရှိတယ်။ ကိုယ့်မှာ မကျန်းမာဘူး။ ဘာဖြစ်လဲ။ ကိုယ့်မှာ သိက္ခာသုံးပါး ရှိတယ်။ ကိုယ့်မှာ ငွေကြေး မချမ်းသာဘူး။ ဘာဖြစ်လဲ။ ကိုယ့်မှာ သိက္ခာသုံးပါး ရှိတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို အခြံအရံ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမှ မဟုတ်တာ။ သိက္ခာသုံးပါးနဲ့ ပဲ ဆုံးဖြတ်တာပဲ။
အလုပ်သွားတဲ့အခါ ကားပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဂုဏ်တော်လေးကို ပွားနေမယ်။ အလုပ်နားနေတဲ့ အချိန်လေးတွေမှာလည်း ဂုဏ်တော်လေးကို ပွားနေမယ်။ နောက်ဆုံး အိမ်သာတက်ရင်လည်း ဟိုဟိုဒီဒီတွေ တွေးမနေဘဲ ဂုဏ်တော်လေး ပွားတက်မယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံမကုန်ဘဲ သမာဓိသိက္ခာတွေ ဖြစ်နေတာပါ။။ တစ်ယောက်တည်း လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေမှာလည်း တတ်နိုင်သမျှ သတိလေးကပ်ပြီး လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်း ပညာသိက္ခာတွေ တည်နေတာပါ။
“ငါ့ရင်ထဲမှာ သိက္ခာသုံးပါး တည်နေရင် ငါဟာ တန်ဖိုးရှိနေတာပါပဲ” ဆိုတဲ့ အတွေးလေးကိုတော့ ရင်ထဲမှာ သေချာ ထည့်ထားရမှာပါ။ တတ်နိုင်ရင် ကိုယ့်အိပ်ခန်းထဲမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်စားပွဲ ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်အမြဲ မြင်နေရတဲ့ နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် “ငါ့ရင်ထဲမှာ သိက္ခာသုံးပါး တည်နေရင် ငါဟာ တန်ဖိုး ရှိနေတာပါပဲ” ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေးကို ကပ်ထားရမှာပါ။ ဒါဆို စာတမ်းကို မြင်တိုင်း မြင်တိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လို ဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုတာ သတိပေးပြီးသား ဖြစ်နေတော့တာပါ။
ကျန်ရှိနေတဲ့ သက်တမ်းလေးကို သိက္ခာသုံးပါးနဲ့ နေသွားရုံပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ တွေးစရာ သံဝေဂဖြစ်ဖွယ် ဥဒယဘဒ္ဒ ဇာတ်ကလေးကို
တစ်ခုသော ညတစ်ညမှာ ဥဒယဘဒ္ဒ မင်းသမီးဟာ ပြဿဒ်ထက် တိုက်ခန်းမှာ နေနေပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ လုလင်ပျို တစ်ယောက်ဟာ ရွှေခွက်နဲ့ရွှေအပြည့်ထည့်ပြီး ရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီလုလင်က မင်းသမီးကို လူပျိုစကား စပြောပါတယ်။
“မင်းသမီး... တစ်ညလောက် သင့်တိုက်ခန်းမှာ အတူတကွ နေပါရစေ”
မင်းသမီးလည်း အတော် ထိတ်လန့် သွားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ အောက်မှာ အစောင့်တွေ အများကြီး ချထားလို့ပါ။ ဒါကြောင့် မင်းသမီးက “ဘယ်လိုလုပ် တက်လာတာလဲ” ပြန်မေးပါတယ်။
လုလင်ကလည်း “ငါဟာ နတ်သားတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။ ငါ့အတွက် မခက်ပါဘူး။ သင်က ငါ့ကို ချစ်တယ်ဆိုရင် ပါလာတဲ့ ရွှေခွက်နဲ့ရွှေအပြည့် ပေးပါ့မယ်” လို့ပြန်ပြောပါတယ်။
ဒီတော့ မင်းသမီးက “သင့်ဟာသင် နတ်သားမကလို့ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ကျွန်မခင်ပွန်းဟောင်း မင်းသားမှ တစ်ပါး ဘယ်သူ့ ကိုမှ မမြတ်နိုးဘူး။ သင်ပြန်ပါတော့” လို့နှင်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒုတိယည ကျတော့ လုလင်ပျိုနတ်သားက ငွေခွက်နဲ့ရွှေအပြည့်ထည့်ပြီး ရောက်လာပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းသမီးက ချက်ချင်းပဲ ပြန်လွှတ်ပါတယ်။
တတိယည ကျတော့လည်း လုလင်ပျို နတ်သားက ကြေးခွက်နဲ့ ရွှေအပြည့်ထည့်ပြီး ချစ်ရေးဆိုလာပြန်ပါတယ်။
ဒီမှာတင် မင်းသမီးက စဉ်းစားပါပြီ။ ပထမရက်မှာ ရွှေခွက်နဲ့ ။ ဒုတိယရက်မှာ ငွေခွက်နဲ့ ။ တတိယရက်မှာ ကြေးခွက်နဲ့ ဆိုတော့ သူ့ အတွက် အထူးအဆန်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းသမီးက လုလင်ကို မေးကြည့်ပါတယ်။
“အသင် ယောက်ျား...ယောက်ျားဟာ မိန်းမကို ချစ်ရေးဆိုရင် ဥစ္စာပစ္စည်းကို တိုးတိုးပဲ ပေးရတယ်။ သင်က ဘာဖြစ်လို့တစ်နေ့ ထက်တစ်နေ့လျှော့လျှော့ပေးရတာလဲ” လို့မေးပါတယ်။
ဒီတော့ လုလင်ပျိုကလည်း ပြန်ဖြေပါတယ်။ “မင်းသမီးရယ်၊ သင့်ရဲ့ အသက်နဲ့ရုပ်ရည်အဆင်းက တစ်နေ့ ထက်တစ်နေ့ 
တိုးတိုးပျိုပျို လာတယ်ဆိုရင်တော့ ဥစ္စာပစ္စည်းကို တိုးတိုးပေးမှာပေါ့။ သင်မင်းသမီးရဲ့ အသက်နဲ့ရုပ်ရည်အဆင်းက တစ်နေ့ ထက်တစ်နေ လျော့လျော့အိုအို လာတာပဲ။ ဒါကြောင့် ငါက ပစ္စည်းကို လျှော့လျှော့ပေးတာပါ။ မင်းသမီးရယ် တစ်ရက် တစ်ည ကုန်လွန်တာကို ထားလိုက်ပါဦး။ အခု သင့်ကို ငါကြည့်နေဆဲမှာပဲ သင့်ရဲ့ ရုပ်ရည် အဆင်းတွေက တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့အို အို လာနေပြီလေ။ တဖြည်းဖြည်း တစ်နေ့ ထက် တစ်နေ့ပျိုပျိုလာတာမှ မဟုတ်တာ” လို့ ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။
နောက် လုလင်နတ်သားက မင်းသမီးကို နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်း ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကို ဆက်ပြီး ဟောပြပေးပါတယ်။
တကယ်တော့ လုလင်ပျိုက အတိတ်လူ့ ဘ၀က မင်းသမီးရဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်းပါ။ လူ့ပြည်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဇနီးဟောင်းကို လာပြီး သတိပေး တရားဟောတာပါ။
လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်ကုန်သွားတာနဲ့သေဖို့ တစ်ရက် နီးနီးသွားတာပါ။ သေဖို့ တစ်ရက် နီးသွားတာနဲ့ကုသိုလ်ပြုဖို့ အခွင့်အရေးတွေ တစ်ရက် လျှော့သွားတာပါ။ ပြီးတော့ တစ်ရက် ကုန်သွားတာနဲ့အို အိုသွားတာပါ။ တိုး တိုးပြီး ပျိုပျို
ဒီတရားသဘောကို အခြေခံပြီး ဆရာတော် ဘုရားတွေက “တစ်ရက် ကုန်ပြန်၊ ငါ့ရုပ်နာမ်၊ သေရန် တစ်ရက်နီးလာပြီ” လို့သတိပေးထားပါတယ်။
မနက်အိပ်ရာက နိုးတာနဲ့ မထသေးဘဲ “တစ်ရက်ကုန်ပြန်၊ ငါ့ရုပ်နာမ်၊ သေရန် တစ်ရက် နီးလာပြီ” လို့နှစ်ခေါက်လောက် ဆင်ခြင်လိုက်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း သတိပေးပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါဆိုရင် တစ်နေ့ တာဖြတ်သန်းတဲ့အခါ
အကုသိုလ် ပြုချင်စိတ် ရှိတော့မှာ မဟုတ်သလို ကုသိုလ်ပြုဖို့ ကိုလည်း သေချာအားထုတ်တော့မှာပါ။
တစ်ရက်ကုန်သွားတာနဲ့သေဖို့ တစ်ရက်နီးလာပြီဆိုတာလေးကို သံဝေဂဖြစ်အောင် သေချာဆင်ခြင်ရမှာပါ။
ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ကုသိုလ်ပါရမီဖြည့်ဖို့အခွင့်အရေး ရက်တွေက ပိုပြီး ရှိနေပါသေးတယ်။
ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲ ရောက်နေရောက်နေ “ကျန်ရှိနေတဲ့ သက်တမ်းကို ဘယ်လိုနေမလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို သေချာမေးပြီး ကျန်ရှိနေတဲ့ သက်တမ်းအတွက် “ဘ၀ပုံစံ” ကို သေချာချရမှာပါ။ ကိုယ်ချထားတဲ့ “ဘ၀ပုံစံ” အတိုင်း နေသွားဖို့ ပါ။
ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ၊ ဘာမှ အားငယ်စရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ သိက္ခာသုံးပါး တည်နေရင် ကိုယ်ဟာ တန်ဖိုးရှိနေတာပါပဲ။
စာကြွင်း။ ။ ဒီဓမ္မစာစုလေးဟာ စာရေးသူ ၄.၆.၂၀၀၉ နေ့ က မုံရွာဗောဓိတစ်ထောင်မှာ ၀န်ချီစက်ပြုတ်ကျလို့ခြေထောက်ကျိုးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ဟောထားတဲ့ တရားလေးကို ဆောင်းပါးအဖြစ် ပြန်ရေးလိုက်တာပါ။
စာရေးသူ ကျိုးပြီး နောက်ပိုင်းမှာ စိတ်နှစ်စိတ်ဖြစ်လာပါတယ်။ တစ်စိတ်က ကြောက်လန့်သွားတဲ့စိတ်ပါ။ တစ်စိတ်က သံဝေဂ စိတ်ပါ။ သံဝေဂစိတ်ဖြစ်တာ ကောင်းပေမယ့် ကြောက်လန့် စိတ်ကျတော့ လူကို တော်တော်ဒုက္ခပေးပါတယ်။ ခရီးဝေးသွားရမှာတောင် ကြောက်သွားပါတယ်။ ဘ၀မှာဖြစ်ချင်တာတွေ အကုန်နီးပါးဖြစ်၊ လိုချင်တာတွေ အကုန်နီးပါးရဆိုတော့ “သြော်...ငါအတိတ်ကုသိုလ် ပါရမီတွေ တော်တော်ကောင်းခဲ့ပါလား၊ ဒီဘ၀ ပြုနေတဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်း အကျိုးပေးနေပုံရတယ်။ ဆက်လည်း ပြုနေအုံးမှာဆိုတော့ နောင်လည်း ဒီထက်မကတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေက လာနေအုံးမှာပဲ” ဆိုတဲ့ အတွေးက အစဉ်သဖြင့်ရှိနေလို့ ပါ။ ဒီမှာတင် အဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့ကြုံလိုက်ရတော့ ကြောက်လန့် စိတ်ဝင်သွားပါတယ်။
ကျိုးပြီးနောက်ပိုင်း ဒကာ ဒကာမတွေက ယခင်ကထက် ပိုဂရုစိုက်ပေးပါတယ်။ န၀ကမ္မဆိုလည်း ကပ္ပိယမှတစ်ဆင့် ပိုပိုလျှံလျှံ လှူပေးတာပါ။ ဘယ်ဆေးရုံသွားချင်လဲ၊ ဘယ်လောက်ပဲကုန်ကုန်ဆိုပြီး ကုန်ကျစရိတ် အကုန်လှူမယ်လို့ဆိုလာတဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေလည်း အများကြီးရယ်ပါ။ ရန်ကုန်-မန္တလေး ဆရာဝန်တွေကလည်း သိပ်ဂရုစိုက်ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကြောက်လန်
့စိတ်ကတော့ ပျောက်မသွားခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အထက်ပါ ဓမ္မစာစုလေးကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို နေ့ ရော ညပါ အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ဟောခဲ့ရတာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဟောရတာလည်း မရိုးနိုင်၊ နာရတာလည်း မရိုးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အကြိမ်ကြိမ် ဟောခဲ့မှ စိတ်သက်သာရာ ရခဲ့တာပါ။ အခုလည်း ဟောနေဆဲပါ။
စာရေးသူနဲ့ စာဖတ်သူဆိုတာ မသိကြပေမယ့် စိတ်ချင်းရင်းနှီးကြတာ များပါတယ်။ ကိုယ်က ရဟန်းဆိုတော့ ကြည်ညိုစိတ်နဲ့ပိုပြီးတောင် ရင်နှီးစိတ် ဖြစ်ကြအုံးမှာပါ။
စိတ်ချင်းရင်းနှီးရင် ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့စာဟာ စာဖတ်သူအတွက် လက်ခံကျင့်ကြံအားထုတ်ဖို့ပိုဖြစ်သွားတော့မှာပါ။ ဒီဓမ္မစာစုလေးဟာ စာဖတ်သူအတွက် ကျင့်ချင်စရာ အကျင့်စရဏလေးတစ်ခု ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ လည်း ယုံကြည်ပါတယ်။
တကယ်လို့စာဖတ်သူက ရင်းနှီးစိတ်ကို အခြေခံပြီး လက်တွေ့ ကျင်ြ့ဖစ်သွားတယ်
ဆိုရင်တော့ စာရေးသူအတွက် ရေးရကျိုး နပ်သွားပါပြီ။
Posted by K at 2:53 AM No comments:
အေပရယ် တစ်နေ့အတွက် ကဗျာ
Friday, April 30, 2010 at 7:19pm
ဒီနေ့ တစ်နေ့လုံးလည်း စိတ်ကို အနားမပေးပါ။
အလုပ်များချင်ယောင်ဆောင်နေမိတဲ့ စိတ်ကလည်း ကျွန်မကို အောင်မြင်ခွင့် မပေး။
တစ်စုံတစ်ရာသော ခံစားချက်မှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း တွယ်နေမိတဲ့ စိတ်..
အေပရယ်က ရက်ရက်စက်စက်ကို ပူပါတယ်
အယောင်ဆောင် အရိပ်တွေနဲ့ ကျွန်မရဲ့ လပြည့်ညကလည်း အနက်ရောင်တောတွေ ထလို့
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ရယ်မောနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေလည်း ခြောက်တသွေ့သွေ့
နူးနူးညံ့ညံ့လေး တွေးကြည့်လိုက်ဖို့တောင် ကံကြမ္မာက မျက်နှာသာမပေးခဲ့ပါ
အဲဒီ စနေရယ် တနင်္ဂနွေရယ် အပြီးမှာ
အားလုံးကို ပြီးဆုံးပါပြီလို့ ကြေညာလိုက်နိုင်တာ အံ့ဩစရာတော့ အနည်းအကျဉ်း ကောင်းနေတယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မယုံခဲ့လို့ အဲဒီ အရိပ်ယောင် နောက် ပြေးလိုက်ခဲ့တယ် လက်တွေကို ရူးရူးမိုက်မိုက် တွဲထားမိတယ်
တကယ်ဆို သံယောဇဉ်ဆိုတာ ဟိုးဝေးဝေးက ခပ်ဝါးဝါး ဇာတ်ကောင်လေး တစ်ကောင်မျှသာပါပဲ
၂ဝ၁ဝ အေပရယ် ၃ဝ (သောကြာ)
ဒလမြို့က ရေဒုက္ခ မြင်ကွင်းများနဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ ဆိုရှယ် ကက်ပီတယ်
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောလို့ ဒီစာကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ ကျမက ဒလသူစစ်စစ် ဆိုတော့ ဒလ အကြောင်း အသိဆုံး နေမှာပေါ့ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းက သတင်းနှိုက်လို့ ချက်ချင်းပဲ ကောက်ရေးဖြစ်လိုက်တဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပါ။
အရင်ကဆို ရန်ကုန်တစ်ဖက်ကမ်းက ဒလဆိုတာ မထင်မရှားမြို့လေးပါ။ အခု သေချာတာတစ်ခုက အရင်ကထက်တော့ နည်းနည်းလေး ပိုလူသိများသွားပြီ။ ပို နာမည်ကြီးစေတဲ့ တွန်းအားက ရေ ... ပေါ့။
တကယ်တမ်းတော့ ကျမတို့ မြို့မှာ ရေပြဿနာက အမြဲတက်နေကျပါ။ မြို့ခံတွေဟာ ရေနဲ့ ပက်သက်ရင် မိုးရာသီမှာ မိုးရေကို မှီခိုရတယ်။ ဆောင်းရာသီနဲ့ နွေရာသီမှာတော့ မိုးရာသီက မိုးရေတွေကို တတ်နိုင်သလောက် သိုမှီးထားတဲ့ ရေကန်တွေကို အားထားရတယ်။ တချို့တွေကတော့ လက်လှည့် ရေတုံကင်တွေ တူးကြတယ်။ အဝီစိတွင်းတွေ တူးကြတယ်။ တစ်ခု ရှိတာက အဲဒီလို တူးကြတာလည်း ကံကို ပုံရသလိုပါပဲ။ ဒလမြို့ဟာ နဂိုကတည်းက မြေအောက်ရေ မကောင်းတဲ့ ဓာတ်ခံရှိတော့ တူးပြီး ထွက်လာတဲ့ရေဟာ သံချေးနံ့ပြင်းပြင်းများ ရလေမလား။ ဆားငန်ဓာတ်များ ကဲနေမလား ဆိုပြီး ရင်တမမနဲ့ တူးရတာပါ။ အဲဒီလိုမှာမှ ကံကောင်းရင် နည်းနည်းပဲ နံ၊ နည်းနည်းပဲ ငန်တဲ့ ရေရတတ်ပြီး အဲဒီရေကို သုံးရေအဖြစ် ပေါပေါလောလော သုံးကြတာပေါ့။ အဲဒါကလည်း ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ဆိုရင် ၂၀ ကနေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါပဲ။ ကျန်တာကတော့ သောက်ရဖို့ ဝေး၊ လုံးဝ သုံးမရတဲ့ ရေတွေပဲ ထွက်တတ်ပါတယ်။ သောက်ရေကတော့ မိုးတွင်းကရေတွေကို အိမ်တွေက တနိုင်တပိုင် လှောင်ထားပြီး သုံးတယ်။ လှောင်ထားတဲ့ ရေတွေကုန်ရင် ရေကန်တွေကို အားကိုးတယ်။ အဲဒါ ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ပေါ့။
နောက်ပြီး ရေပေးဝေရေး ကော်မတီတစ်ခုကို (သိပ်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး) လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ် လောက်က ဖွဲ့ပြီး ဒလမြို့အလွန် ကျေးရွာတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်ပေါက်က ရေကို ပိုက်တွေ သွယ်တန်းပြီး ဖြန့်ဝေ ပေးတယ်။ ယူမယ့် အိမ်ထောင်စုတွေက တစ်အိမ်ထောင်ကို ဘယ်လောက် ငွေသတ်မှတ်ပြီး ပေးရတယ်။ နောက်ပိုင်း လစဉ်ကြေးကိုတော့ မီတာ မှန်မှန်လာဖတ်ပြီး ကောက်တယ်။ အဲဒီရေ စရတုန်းကဆို ရေပြတ်လပ်မှုဒဏ် အမြဲခံရတဲ့ ဒလသူ ဒလသားတွေ ပျော်တာပေါ့။ အဲဒီရေကို တချို့က သောက်ရေတောင် လုပ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီ ရေက အစပိုင်းပဲ မှန်မှန်နီးပါးလာပြီး နောက်ပိုင်းတော့ မိုးတွင်းမှာတောင် မှန်မှန်မလာချင်တော့ဘူး။ အခုလို နွေရာသီဆို တစ်လတစ်ခါတောင် မလာတော့ဘူး။ လာတဲ့ရပ်ကွက်တွေ လာတယ်။ မလာတဲ့ နေရာတွေဆိုလည်း တော်တော် ရေပြတ်တဲ့ ဒဏ်ခံရတယ်။ တချို့ရပ်ကွက်တွေဆို ဒီနှစ်ထဲမှာ ပိုက်ရေဆိုတာ မမြင်ဖူးသေးဘူး ဆိုပြီးတောင် ပြောနေကြတယ်။ အဲဒီလိုဆိုတော့ ရေပိုက်တွေတန်းလန်းနဲ့ ရေပြတ်တဲ့ ဒဏ်ကလည်း နှိပ်စက်တော့တာပေါ့။
အဲဒီလို ပုံမှန် ဖြစ်စဉ်မှာမှ နွေရာသီ မတ်လ ကုန်လောက်ထိတော့ ရေရရှိမှုက အိုကေနေပါသေးတယ်။ သင်္ကြန်မရောက်တရောက် အချိန်လောက် ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ ပုံမှန်အတိုင်း ရေရှားမှု စတင်ပါတယ်။ ရေကန်တွေမှာလည်း ရေက နည်းလာပြီ။ ဟိုကန် ဒီကန် ရေရနိုး လိုက်ကြည့်ကြ၊ ရေထမ်းပုံးတွေ ကိုယ်စီနဲ့ ဝေးဝေးလံလံ လိုက်ထမ်းရ၊ မထမ်းနိုင်သူတွေက ရေထမ်းသမားဆီက တောင်းသလောက် ဈေးနဲ့ ဝယ်ရနဲ့ ရေရဖို့ ရုန်းကန်ရတယ်။ အဲဒါထက်ဆိုးလာရင် ခန်းစပြုလာတဲ့ ရေကန်တွေမှာ တာဝန်ရှိသူတွေ စီစဉ်ပေးသလို ရေကို တန်းစီခပ်ကြရတယ်။ တန်းစီရင်း ခိုက်ရန် ဖြစ်တာတွေ ရှိလာတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်နှစ်တွေကဆို အဲဒီ ပြဿနာတွေက မေလလယ်လောက် မိုးကျပြီဆိုတာနဲ့ ပြေလယ်သွားတာပါ။ မိုးကို အမြဲ မျှော်ရတယ်ပေါ့။ မိုးကလည်း စောစော ကျတတ်လို့ ရေရှားပါးမှုကို မြို့သူမြို့သားတွေက ကျိတ်မှိတ်ခံရင်း ရတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းလိုက်တာချည်းပါပဲ။
ဒီနှစ်တော့ ပြောကို မပြောချင်တော့ပါဘူး ဖြစ်နေပြီ။ ဧပရယ်လလယ်လောက် ကတည်းက ရေကန်တွေမှာ ရေခန်းသွားတယ်။ ပိုက်ရေကလည်း လုံးဝ မတွေ့ရ။ ရာသီဥတု ပူပြင်းချက်ကလည်း အပူချိန် ၄ဝ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ကျော်ပြီဆိုတော့ လူတွေလည်း နေပူပူမှာ ရေပြတ်လပ်မှုကိုပါ အပိုလက်ဆောင် ရလာရော။ အခြေခံ လူတန်းစားတွေ များတဲ့ ဒလမှာ ရေသန့်ဘူးတွေလည်း မှန်မှန် မဝယ်နိုင်ကြဘူးဆိုတော့ နဂို အားထားနေရတဲ့ ရေကန်တွေ ရေတွင်းတွေ ခန်းသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ ပိုက်ရေကို မျှော်ကြတယ်။ ပိုက်ရေ မလာတော့ ရေနောက် ဘယ်လို လိုက်ရမလဲ ဖြစ်ကုန်ကြပြီး ဒီနှစ် ဖြစ်ချင်တော့ မိုးကလည်း သင်္ကြန်မိုးလည်း မလာ၊ ကဆုန်မှာလည်း ညောင်ရေမသွန်းဆိုတော့ အပူချိန်များနေတဲ့ ဒေသလေးမှာ မကြုံစဖူး ထူးထူးကဲကဲ ရေကန်တွေ ခြောက်သွေ့ အက်ကွဲကုန်ပြီး ကန္တာရ မြင်ကွင်းတွေလို ဖြစ်ကုန်ပြီ။ အသက် ၆၀ အရွယ် လူတစ်ယောက်ကဆို ဒီလိုမျိုး တစ်ခါမှ မကြုံဖူးဘူး၊ ပူတာရော၊ ရေပြတ်တာရော ဒါ အဆိုးဆုံးပဲ လို့ ပြောနေတယ်။
ဒီလိုဆိုတော့ အသံတွေ နည်းနည်း ထွက်လာတော့တာပေါ့။ ဒုက္ခရောက်လာတဲ့ ပြည်သူတွေ အသံထွက်လာပြီဆိုရင် အရင်ဆုံး ရောက်လာနေကျဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့အကူအညီပဲ အရင် ရောက်လာတယ်။ ရေဖူလုံတဲ့ ဒေသတွေက ပြည်သူတွေ အချင်းချင်း စုစည်းပြီး ရေပြတ်လပ်နေတဲ့ ဒလသူ ဒလသားတွေအတွက် ရေတွေကို ကားတွေပေါ် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တင်ပြီး လှိုင်သာယာတံတား က တဆင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ စဉ့်အိုးတန်း ကူးတို့ဆိပ်ကနေ ကားကူးဇက်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်လာပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အရောက်လာပြီး ရေတွေ လှူကြတယ်။ နာဂစ် ကာလတုန်းကလို မြင်ကွင်းမျိုး ခပ်ဆင်ဆင် ပြန်တွေ့နေရသလိုပါပဲ။ ပြည်သူ အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကြ၊ ကူညီကြ၊ စာနာကြပေါ့။ တချို့ကားတွေက ရေသန့်ဘူးတွေ အပြည့်တင်၊ တချို့ကားတွေကတော့ ပလပ်စတစ်ရေပုံးတွေ အပြည့်တင်၊ တချို့ကားတွေကတော့ ရေတိုင်ကီတွေတင်၊ တချို့ကတော့ ရေကားကြီးတွေနဲ့ပေါ့။ တစ်လမ်းဝင် တစ်လမ်းထွက် ရေပေးဝေနေလိုက်တာ တစ်အိမ်ထောင် ရေဘယ်နှစ်ပုံးဆိုပြီး ဝေတဲ့ရေကို တန်းစီပြီး ယူကြတဲ့ မြို့သူမြို့သားတွေအနေနဲ့လည်း ပင်ပန်းတယ် မထင်တော့ဘဲ စိတ်တွေ ချမ်းသာနေတယ်။
ဒီလို သတင်းမျိုးတွေနဲ့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေး ရှိလာပြီဆိုရင် ထုံးစံအတိုင်း တချို့ကတော့ ပေါ်ပင်လိုက်ပြီး ရေအလှူကားလိုက်စီးတာမျိုးတွေ၊ သတင်းယူဖို့သက်သက် လိုက်တဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးရှိစေတယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုပဲလိုက်လိုက်ပါ။ ပြောစရာ မရှိပါဘူး။ ပြောချင်တာက ဒီလို ရေအလှူမျိုးကို သာဓုခေါ်ပါတယ်။ ဒီလို မွန်မြတ်တဲ့ အလှူမျိုးကို ရေရှည် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ် တစ်နည်းအားဖြင့် နောက်တစ်ခါ ဒီလို ရေဒုက္ခ မဖြစ်ရအောင် ကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီး သာဓုခေါ်စရာ လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့။ ဥပမာအားဖြင့် ရေကန်တွေ ပိုနက်အောင် ပိုကျယ်အောင် တူးတဲ့ နေရာမှာ ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတာမျိူး၊ သွယ်တန်းထားပြီး မှန်မှန်မရတဲ့ ပိုက်ရေ မှန်မှန်ရနိုင်အောင် သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးတွေနဲ့အတူ ကြိုးပမ်းပေးတာမျိုးပေါ့။
ဘာပဲပြောပြော အခုဆို မိတ်ဆွေတွေ အပေါင်းအသင်းတွေက တခုတ်တရ သတင်းတွေမေးကြပါတယ်။ အနည်းလေး နင်ရေချိုးလာရဲ့လားလောက်တော့ မေးပြီး ကျမကို ဂရုတစိုက် ပြုပေးကြပါပြီ။ ရေမရှိရင် သူတို့အိမ် လာချိုးပါ၊ အဝတ်တွေ လာလျှော်ပါလို့ ပြောပေးတဲ့သူတွေလည်း များပါတယ်။ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေ စုပြီး တနိုင် ရေကားတွေ စုငှားပြီး ရေလာလှူတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကလည်း လာခါနီးဆို သတိတရ အသိပေးကြပါတယ်။ တကယ်ကို ကြည်နူးစရာ ကောင်းပါတယ်။ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ လူမှုရေး စိတ်ဓာတ်လေးတွေဆိုတာ ဒီလို အခက်အခဲကြုံရချိန်ဆို အဆိုးထဲက အကောင်းလေးလို ပေါပေါများများ မြင်ရတတ်တဲ့ အရာတွေပေါ့။ မြန်မာတို့ရဲ့ လူမှုရေး စိတ်ဓာတ်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ် နာဂစ်ကာလများတုန်းက ကမ္ဘာကတောင် အသိအမှတ်ပြု မှတ်ကျောက်တင်ခဲ့ရတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပေါ့။ အဲဒီ စိတ်ဓာတ်လေးတွေကို မြင်ရတဲ့အချိန်မျိုးတွေဆိုတာ တကယ့်ကို ကပ်ဆိုက်သလို ကြုံရတဲ့ အခါမျိုးတွေ ဖြစ်နေတော့ တကယ်ကို ဝမ်းနည်း ဝမ်းသာပါပဲ။ နောင်နှစ်တော့ ဒီလို ရေဒုက္ခမျိုးကို ရှောင်လွှဲနိုင်ရပါလို၏ ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ရေဒုက္ခသည်တွေ အားလုံးရဲ့ တူညီသော ဆုတောင်းပေါ့။
မှတ်ချက် - အခုရေးထားတဲ့ အချက်တွေက ဒလမြို့ အပြင်ပန်းရပ်ကွက်တွေက မြင်ကွင်းတွေလို့ ပြောလို့ရပါတယ်. ။ ဟိုးအတွင်းပိုင်းတော်တော် ကျတဲ့ ရပ်ကွက်လေးတွေမှာဆို ဒီထက် အဆများစွာ ပိုဆိုးတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို ကျမ မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒလသူ လုပ်နေပြီး မရောက်ဖူးသေးတဲ့ ဒလနယ်မြေတွေ အများကြီး ရှိနေတာ သိလိုက်ရပြီး ရေလာဝေရင်တောင် ယူထားဖို့ ရေထည့်စရာ မရှိတဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေကို တွေ့ရတာ ရင်နာစရာ ..။ မြန်မာပြည်မှာ ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေ ရှိနေဆဲဆိုတာ ဘယ်သူတွေ သိအောင် လုပ်ရမလဲ စဉ်းစားစရာလည်း ကောင်းသွားတယ်။
ကျန်ရှိနေတဲ့သက်တမ်းကို ဘယ်လိုနေမလဲ (ဆရာတော် အရှင်ဆ...
ဒလမြို့က ရေဒုက္ခ မြင်ကွင်းများနဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ ဆို...